नागरिकको बिग्रदो मनोदशा
classickhabar २०७४ श्रावण १६ सोमबार प्रकाशित
पछिल्ला केहि दिनयता नागरिक वेपत्ता, हत्या र आत्महत्याका खवर दिनहुंजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । ४ दिन अगि राजधानीको एक विद्यालयमा अध्ययनरत विशाल चौधरी हराए । करिव १ महिना अगाडि हराएका कृषि विकास वैंक कुश्मा पर्वतका कर्मचारी दिपेन्द्र गौडेल मृत अवस्थामा फेला परे । त्यसैगरि दुई जनाले पर्वतको अग्लो पुलवाट हाम फालेर आत्महत्या गरे । काभ्रेमा एकै परिवारका चार जनाले आत्महत्या गरे । यी समाचारमा आएका केहि प्रतिनिधी घटना हुन् । समाचारमा नआएका , ल्याउन नचाहेका अनि आउन नसकेका यस्ता घटना नेपालमा बढिरहेका छन् । आखिर यसो किन भइरहेको छ ? नागरिकमा आफ्नो जिवनप्रतिको आशा एवं भरोसा किन घटिरहेको छ आजका यक्ष प्रश्न यी हुन ।
समाज यसरी अपराधिकरणको दलदलमा फस्नुमा ,घोर निराशाको दलदलमा फसेर आत्महत्यालाई सहजै स्विकार्ने गरि नागरिकको मनोदशा बिग्रनुमा के कस्ता परिस्थिति जिम्मेवार छन्, यसको निर्मम समिक्षा, अध्ययन र अनुसन्धान र निराकरणको आवश्यक भइसकेको छ । कुनै व्यक्तिको मनोदशा विग्रनुमा धेरै कारणहरु जिम्मेवार हुन्छन् । व्यक्तिको व्यक्तिगत कमजोरी देखि पारिवारिक वातावरण, सामाजिक संस्कार देखि राज्यका कमजोरी पनि हुन्छन् । व्यक्ति आत्महत्याको अवस्थामा किन पुग्छ , यसवाट रोक्ने उपायहरु के के हुनसक्छन्, पारिवारिक सम्बन्धहरु किन विघटन भइरहेका छन् ? आज यसको हामीले गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गर्दै नागरिकलाई आशावादी बनाउनुपर्ने भएको छ । जिवनमा निराशा आउंछ सगसंगै आशा पनि आउंछ भनेर आशावादी जागरणको अभियानको जरुरी भइसकेको छ । निराशहरुका लागि आश बनेर, जागरणको मसाल बनेर राजनीतिक , सामाजिक जागरणका अभियान्ताहरु , मनोविज्ञानका मर्मज्ञहरु फेरी एकचोटि आशावादी, सकारात्मक चिन्तनको प्राण हरेक नागरिकमा भर्न जाग्नुपर्ने देखिएको छ ।
हरेक समस्यासंगै समाधान हुन्छ । असफलतापछि सफलता हुन्छ भन्ने मान्यतालाई नागरिकको जिवनको मान्यताका रुपमा स्थापित गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । सामाजिक संजालले मान्छेलाई एकतार्फ सुसुचित गर्न सहयोग पुर्याएको छ भने यसको अत्याधिक प्रयोगले मान्छेलाई असाध्यै एकांकी र आत्मकेन्द्रित बनाएको छ । यसले समस्या उत्पन्न गराएको छ । जिवनमा आशा भर्न राज्यले विशेष जागरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिएको छ । आशावादी दर्शनका प्रणेताहरु फेरी एकचोटि जाग्नुपर्ने बेला आएको छ । नागरिकको मनोदशामा लागेको कालो बादललाई आशावादी किरणले हटाउनुपर्नै भएको छ ।